Nguva dzakaoma hadzigari, asi vanhu vakaoma vanodaro. - Robert H. Schuller - Quotes Pedia
Nguva dzakaomarara hadzina kumbogara, asi vanhu vakaomarara vanodaro. - Robert H. Schuller
Kusimba uye kwepfungwa simba rinogona kuenda kure mukutibatsira kufamba mukati menguva yakaoma. Tinofanira kuva nepfungwa dzakanaka uye dzinoshanda. Kutarisana nenguva dzakaoma uye kubuda mairi zvinobudirira tinofanira kuedza kuwana mhinduro dzinozotibatsira kubuda mumamiriro ezvinhu.
Kana munhu mumwe chete ari oga asingakwanise kudaro, zvinogara zvichikurudzirwa kuti kuedza kwekubatana kuiswe mukati menguva dzakasviba. Mumwe anofanirwa kugara achiyeuka kuti "Izvi zvakare zvichapfuura". Isu tinongoda kumirira kunze nekutsungirira netariro.
Vanhu vanodzidza kupinda munguva dzakaoma uye zvakanyanya kukosha kukudziridza hunyanzvi hwekutarisana chero mamiriro ezvinhu akaoma ndevaya vanova vanhu vakaoma.
Ndivo avo vamwe vavanogona kuvimba navo uye kukurudzirwa kubva kwavari. Ndidzo dzinobatsira vamwe kuti vadzedzere pamamiriro ezvinhu akaoma nekuti ivo vakadzidza kuburikidza neruzivo - uye ndiyo inogara iri mhando yekudzidza.
Vanhu vanogara mukati menguva dzakaoma vanonyatsonzwisisa kukosha kwehupenyu uye zvinhu zvakawanda, izvo zvatisingarerutsi. Vakanga vari mune imwe mamiriro ezvinhu apo ivo vangadai vaifanira kupa chibayiro chakawanda, asi ivo vakabuda mazviri. Naizvozvo, ivo vanokoshesa chaizvo zvinhu zvidiki muhupenyu uye vane zvakawanda zvidzidzo zvekupa.
Kana iwe ukasangana nevanhu vakaoma kudaro, nguva dzose edza kuziva zvakawanda nezvezvinoitika zvavo uye dzidza kubva kwavari; kuitira kuti iwe uve neruzivo rweizvo iwe unofanirwa kunge uchiita kana ukasangana nematambudziko chero zuva.
Kuwana kuburikidza Nakaoma Nguva Quotes
Nguva Dzakaoma Quotes
Nguva Dzakaoma Quotes And Sayings
Quotes About Zvakaipa Nguva
Quotes Pamusoro Pokukunda Nguva Dzakaoma
Quotes Nezve Kusimba Mune Nguva Dzakaoma
Mapfupi eChirungu Quotes
Dzimwe nguva Hupenyu Hwakaoma Quotes
Pamusoro Quotes Zvese Nguva
Zvakaoma Vanhu Quotes
Yakaoma Nguva Quotes
Kana Upenyu Hwakawana Makumi Makobvu
Zvakaitika nhasi zvaive zvisingaite zuro. - Robert H. Schuller
Paunenge uine chinangwa, uye iwe uchishandira kuchichienderera mberi, imwe nguva kana imwe, uchaona…
Matambudziko haasi kumisa zviratidzo, iwo marongero. - Robert H. Schuller
Kana hupenyu hukakupa mandimu, zviitire iwe lemonade. Gara uchibata chero dambudziko rinouya kwauri se…
Gara uchitarisa pane zvawakasiya. Usambofa watarisa pane zvawakarasa. - Robert H. Schuller
Ichi chirevo chinoda kuti iwe upesane nesimba rakasimba kwazvo rehunhu uye uvandudze nyowani…
Rega tariro dzako, kwete zvinokuvadza, zvigadzire ramangwana rako. - Robert H. Schuller
Rega tariro dzako, kwete zvinokuvadza, zviumbe ramangwana rako. - Robert H. Schuller Akabatana Zvinyorwa: